Home » Career » DASTUURKA SOOMAALIYA PDF
JAMHUURIYADDA FEDERAALKA EE SOOMAALIYA. جمهوري الصومال. Guddiga Dib-u-habeynta Qabyoqoraalka Dastuurka. Jamhuuriyadda Federaalka. Dastuurka Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya (Af-Ingiriis: Constitution of the Federal Republic of Somalia, Af-Carabi: دستور جمهورية الصومال الفدرالية) Waa. JAMHUURIYADDA FEDERAALKA EE SOOMAALIYA ﺝـﻡـﻩـﻭﺭﻱـﺓﺍﻝﺹــﻭﻡــﺍﻝ Guddiga Dib-u-habeynta Qabyoqoraalka Dastuurka Jamhuuriyadda Federaalka .
Author: Faukus Mecage
Golaha Wasiirrada waa ay ka iman karaan xubin ka mid ah Golaha Shacabka iyo xubin aan ka mid aheyn Golaha Shacabkaba. Dawladaha Xubnaha ka ah Federaalka ee Ka jira Soomaaliya 1 Ilaa inta laga gaarayo goorta dhammaan o Dastuurada dawladaha xubnaha ka ah federaalka la waafajinyo Dastuurka Dawladda federaalk maamulada jira ka hor inta aan la qaadan Dastuurkan ku meel soomaqliya ahi waxa ay sii haysanayaan awoodaha Dastuurkoodu siinayo.
Cutubka 4aad Waajibaadka Jamhuuriga ah. Somaaliya Xeer-dejinta Golaha Shacabka Qodobka 76, faqrada 5 – Ansixinta dacwad ku oogid ee khiyaamo Qaran oo wayn ama tallaabo isku day oo liddi ku ah nidaamka Dastuurka ama oggolanaasho in la bilaabo tallaabo sharci ka qaadid ee dembi kuna saabsan debmi kale ee kasta waxay u baahanayaan in si deg-deg ah loo laalo awoodaha Madaxwaynaha.
Xeer-hoosaadka Golaha Aqalka Sare ee Baarlamaanka Federaalka 1 Golaha Aqalka Sare ee Baarlamaanka Federaalku waa in uu samaystaa xeer-hoosaadkiisa, kaas oo ka-qaybgal buuxa siinaya xubnihiisa.
Dhaqangelinta Dastuurka 1 Ka dib dhammaadka muddada koowaad ee Baarlamaanka Federaalka ee Jamhuuriyadda Soomaaliya, Baarlamaanka Federaalku waxaa uu dhisayaa Guddi dib- u-eegis ku sameeya hirgelinta iyo shagaynta Dasturka jamhuuriyadda Federaalka Soomaliya, marka lagu ansixiyo hab waafaqsan qodobka ee ku saabsan qaadashada Dastuurka kama dambaysta ah, iyo in lala tashado dawladaha xubnaha ka ah Federaalku ka koobanyahay iyo dadweynaha wax-ka-beddelidda in lagu sameeyaa ay suurtogalka tahay.
Dhulka 1 Dhulku waa kheyraadka koowaad ee Soomaaliya iyo saldhigga nolosha dadka. Wassiirka la magacaabay haddii uu xubin ka yahay labada Aqal midkood ama uu hayo xil guud ama mid gaara ah, waa in uu iska casilaa kursigiisa 90 casho gudahood kadib markii loo dhaariyo xafiiska 2 Madaxweynuhu marka uu dhisayo Golaha Wasiirrada waa in uu tixgeliyaa qaybaha ay ka kooban tahay bulshada Soomaaliyeed.
Qodobka aad-Dhaarta Madaxweynaha Inta uusan hawsha bilaabin Madaxweynaha Jamahuuriyaddu wuxuu marayaa dhaarta ku xusan sharciga, waxaana lagu hor dhaarinayaa xaflad ka dhacaysa fagaare dadweynuhu joogaanwaxaana dhaarinaya Guddoomiyaha Maxkamaada Dastuuriga.
April 25, Xigtada ugu dhow carruurta waa in sida ugu dhaqsaha badan oo suurtogal ah loo war-geliyaa xiritaankooda. Guddiga Xuquuqda Aadanaha 1 Baarlamaanka Federaalka ihi waa inuu dhisaa Guddi Xuquuqda Aadanaha u qaybsan oo ka madax bannaan maamulka Dawladda, lehna ilo dhaqaale oo uu si habsami leh ugu fuliyo hawlihiisa.
Dastuurka Soomaaliya Iyo Laalidda Awoodaha Madaxweynaha – Goobjoog News
Hawlwadeennada iyo Shaqaalaha Dawladda a Hawlwadeennada iyo Shaqaalaha Dawladdu waxay xilkooda u gudanayaan si waafaqsan sharciga iyo danta guud oo keliya. Haddii uusan jirin madaxweyne-ku-xigeen ama madaxweyne-ku-xigeenku uusan awoodin in uu qabto xilka, afhayeenka Golaha Shacabka ayaa la wareegaya xilka madaxweynaha.
Wada-xaajoodyada Caalamiga 1 Iyada oo la qaddarinayo nuxurka iskaashi ee lagu shaqaynayo, xukuumadda Federaalku waa in ay Dawlad- goboleedyada kala tashataa wada-xaajoodyada la xiriira kaalmada dibedda, ganacsiga, cahdiyada ama arrimaha muhiimka ah ee la xiriira heshiisyada caalamiga ah.
Habraaca Sharci-dejinta Baarlamaanka Qodobka 79aad. Qaadashada wax ka bedelka Dastuurka inta lagu guda jiro muddo xileedka koowaad ee Aqalka Shacab; ansixinta Dastuur kama dambays ah 1 inta lagu guda jiro muddo xileedka koowaad ee Baarlamaanka Federaalka ee Soomaaliya, baarlamaanka Federaalku waxaa uu qaadan doonaa waxkabeddelka la soo dasyuurka ee Dastuurka ku meel gaarka ah kaliya intii lagaga ansixiyay kadib cod kama dambays ah aqalka shacabka codkaasoo u dhigma sadex meeloodow laba meeloodiyo cod kama dambaysa ah oo ay u qaadaan Aqalka Sare ee Baarlamaanka Federaalka ah, codkaasoo ugu yaraan ah sadex meeloodow laba meelood xubnaha jira.
Dib u eegista dastuurka ayaa qodobbada ugu waaweyn ee horyaalla waxaa ka mid ah qeybsiga kheyraadka dalka, hannaanka dowladnimo ee Soomaaliya, maqaamka iyo sida ay noqoneyso caasimadda Muqdisho, iyo nooca federaal ee uu dalka qaadanayo madaama haatan Soomaaliya ay tahay dal federaal ah.
Golaha Wasiirrada marka ay helaan kalsoonida Golaha Shacbiga waxay marayaan dhaarta ku xusan sharciga, waxaana ku hor dhaarinaya fadhi gaar ah ee Golaha Shacbiga Gudoomiyaha Maxkamada Dastuuriga.
Dhaqangelinta Xuquuqda Asaasiga Ah Bannaanaanta Xafiiska Madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Qodobka A Golaha Adeegga Garsoorka 1 1. Iscasilaadda Madaxweynaha Soomaaliha Federaalka Madaxweynuhu wuxuu u gudbinayaa istiqaaladiisa Barlamaaanka Federaalka, isaga soomaalia marsiinaya Guddoomiyaha Golaha Shacabka ee Baarlamaanka Federaalka ah.
Waxka Beddelka Dastuurka Qodobka aad. Leave a Reply Cancel reply Your email address will not be published. Xilka Xubnaha Baarlamaanka 1 Xubin kasta oo ka mid ah labada Aqal ee Baarlamanka Federaalka marka ay xilkeeda gudaneyso waa in ay ku shaqaysaa sida ay danta qaranku ku ddastuurka. Tirada xubnaha Golaha Shacabka 1 Xubnaha Golaha Shacabka waxaa si toos ah, qarsoodi ah, oo madaxbanaani ku dooranaya shacabka Jamhuuriyadda Federaalka ee Soomaaliya.
Ka-qaybgalka Wasiirrada ee Fadhiyada Golaha Aqalka Sare ee Baarlamaanka Federaalka 1 Wasiirradu waxay ka soo qayb-geli karaan fadhiyada, kana hadli karaan, iyaga oo aan cod ku lahayn. Shaqaalaha Dawladda ee Rayidka ah 1 Xukuumadda Federaalka iyo Dawladaha xubinta ka ah Dawladda Federaalka waxay shaqaalasanayaan hawl-wadeennadooda. Madaxweyne ku-xigeenka ayaa la wareegaya xilka madaxweynaha inta dacwaddiisu ka dhammaaanayso.
Sixidda Ku-xadgudubka Xuquuqda 1 Sharcigu waa in uu qeexaa habraac habboon oo lagu saxayo xadgudubyada xaquuqda Aadanaha. Guddiga dib-u-eegista iyo Hirgalinta Qodobka aad-Muddada Xaafiiska Madaxweynaha iyo Madaxweyne-Ku-Xigeenka Madaxweynaha iyo madaxweyne ku-xigeenka waxay haynayaan xafiiska ugu badnaan labo xili oo midkiiba uu yahay 5 sano.
Golaha Shacabka ee Baarlamaanka Federaalka ah wuxuu leeyahay awood sharci- dejin oo ah: Golaha Shacabka ee Baarlamaanka Federaalka waxaa kale oo uu leeyahay awoodahan dheeriga ah ee soo socda: Qodob kale oo Somali ah. Inta uusan hawsha bilaabin Madaxweynaha Jamahuuriyaddu wuxuu marayaa dhaarta ku xusan sharciga, waxaana lagu hor dhaarinayaa xaflad ka dhacaysa fagaare dadweynuhu joogaanwaxaana dhaarinaya Dadtuurka Maxkamaada Dastuuriga.
Qodobka aad-Golaha Wasiirada 1 Madaxweynuhu wuxuu magacaabayaa Gole Wasaaradeed aan ka badnayn 23 xubnood oo ay ku jiraan Madaxweynaha iyo Madaxweyne-ku-xigeenku kuwaa oo aan ka dastuuka aheyn xubnaha labada aqal.
Deegaanka 1 Qof kastaa wuxuu xaq u leeyahay inuu helo Deegaan aan waxyeello u lahayn caafimaadkiisa iyo baraarihiisa nololeed oo laga dsatuurka wasakhda iyo waxyaalaha halista ah. Awoodaha Maxkamadda Dastuurka 1 Maxkamadda Dastuurku waay yeelaneysaa soomxaliya u garrka ah: Sinnaanta 1 Muwaaddiniinta oo dhan, iyagoo aan loo eegin lab iyo dheddig, diin, xaalad bulsho ama dhaqaale, afkaar siyaasadeed, qabiil, naafannimo, xirfad, dhalasho iyo afguri toona, xuquuqda iyo waajibaadkaba waa u siman yihiin sharciga hortiisa.
Haddi kale waqtigaas waxaa loo tixgelinayaa in uusan aheyn muddo xileed marka la fiiriyo u jeedooyinka qodobka ee muddo xileedka Madaxweynaha. Qaadashada wax ka bedelka Dastuurka inta lagu guda jiro muddo xileedka koowaad ee Aqalka Shacab; ansixinta Dastuur kama dambays ah Xorriyadda Isu-socodka iyo Degitaanka Guddoomiyaha iyo Garsoorayaasha Maxkamadda Dastuuriga ah; 3.
Xaddidaadda Xuquuqda 1 Xuquuqda lagu sheegay Cutubkan waxaa xaddidi kara sharciga, haddii sharcigaasi uusan si gaar ah u bar-tilmaameedsanayn shakhsiyaad ama kooxo. Magacaabidda Guddiyada Heer Federaal Qodobka 96aad-Doorashada Madaxweynaha iyo Madxweyne Ku- Xigeenka 1 Madaxweynaha iyo madaxweyne ku xigeenka waxaa si toos ah u doran doono dadweynaha.
Qodobka 99aad-Madaxweyne-Ku-Xigeenka Musharraxiinta jagada madaxweynuhu waaa in ay soo magacaabaan qofka ay u xusheen jagada madaxweyne ku-xigeenka kaasoo noqonaya madaxweyne ku-xigeen haddii uu guuleysto musharraxa soo magacaabay, haynayana xilka madaxweyne-ku-xigeenka mudada uu madaxweynuhu hayo xilka madaxweynaha.
Previous post: [ BILLIONAIRE IN TRAINING BRAD SUGARS PDF ]
Next post: [ ICWAI 2008 SYLLABUS PDF ]